Tany lasan'ny vahiny na misoratra aminao aza: tena misy ve?
2021-05-24 @ 12:27 in Ankapobeny
Voalohany aloha dia mampiahiahy ity filazana ity. Nahoana no tsy asiana fitomboka sy sonian'ny prezidan'ny fokontany raha tena marina? Faharoa, amin'izao fotoana mampamaivay ny toe-draharaha amin'ny resaka Karana izao ve no mbola misy tahaka itony tsy fandranitana ady no tena marina? Fahatelo, aleo apetraka eto ho tahiry fa ilay toerana koa moa tsy fantatro hoe aiza marina satria fokontany ilay Ankazobe sy Ambohidrazaka.
Etsy ankilany indray, ny zava-nisy teo aloha dia toa mametraka fa mety ho misy tokoa io toe-javatra iray io. Ny mampalahelo dia ny tompony indray no tsy maintsy mandadilady amin'ilay nandrombaka ny tany raha ny eto. Hatramin'izay dia tany manan-tompo fa tsy misoratra amin'ny anaran'izay mipetraka eo no tratran'ny fandraofan'ny mpanankarena ny tany. Na tiana amidy na tsy tiana amidy ny tany ny dikan'izao dia hoe izay vidiny ataonao fa alainay (efa lasanay) foana ny tany, resy ianao raha mihevitra ny hitondra ny raharaha eny amin'ny Fitsarana. Ilay tany Ambohitrimanjaka ampitan'ny artisanat no ao an-tsaiko. Nanana ny lazany koa io tany ampitan'ny Masiovoho shinoa io, dia lasan'ny Filatex ihany koa, efa nisy afisy goavana teo misy soratra hoe "Casa" kanjo dia io nanaovana ampahan-dalana goavana mankany Nanisana anilan'ny Rocade Est io.
Manahy indray aho, fa mety ho ampiasain'ny Fanjakana indray ity tany ity, efa misy ny ny tetikasa sy tetibola ividianana ny tany dia bizina toy izay nitranga tamin'ilay tany etsy ampitan'ny Masoivohon'i Shina koa ity eto ity. Fa tombatombana daholo izany rehetra izany fa tsy afa-miteny mihitsy hoe izay no tena marina.